Mpilalao horonantsary rehetra amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Mpilalao horonan-tsary rehetra ao amin'ny Linux
Linux dia manana safidy maro raha ny amin'ny filalaovana horonantsary; na izany aza, ny filalaovana haino aman-jery amin'ny ankapobeny (ao anatin'izany ny famerenana feo sns ...) dia tsy mahitsy amin'ny Linux toy ny amin'ny sehatra hafa. Tsy noho ny tsy fahampiana ara-teknika izany, fa olana ara-dalàna fotsiny. Manokana, noho ny patanty mifehy endrika haino aman-jery isan-karazany, nahatonga azy io ho "tsy ara-dalàna" ho an'ny tetikasa loharano misokatra ny filalaovana DVD na ny sasany amin'ireo horonan-tsary sy audio codec malaza.
Fametrahana codec multimedia tsy andoavam-bola.
Alohan'ny hanatanterahana ity fametrahana ity dia tsy maintsy halefa ny tahiry izao rehetra izao y multiverse (jereo ny Activating univers and multiverse).
Raha te hampiasa Totem amin'ny GStreamer (motera default) isika dia tsy maintsy mametraka ireo fonosana:
Raha te hampiasa Totem miaraka amin'i Xine isika dia tokony hametraka ireo fonosana:
To use MPlayerampy instalar ny fonosana mplayer. Mampiasa VLC, ny fonosana vlc.
Manomboka amin'ny Ubuntu 7.10, ho an'ny instalar multimedia codecs (GStreamer) ao anatin'izany ny Java, dia azo atao ao amin'ny toerana ana-toerana ofisialy Ubuntu. Ampidiro fotsiny ireto fonosana virtoaly ireto:
Ubuntu-voafetra-Extras ho an'ny Ubuntu.
kubuntu-voafetra-fanampiny ho an'ny Kubuntu.
xubuntu-voafetra-fanampiny ho an'ny Xubuntu.
Mpilalao horonantsary malaza indrindra:
VLC: Mpilalao haino aman-jery feno sy feno rafitra.
xine: Fandaharam-pampianarana haino aman-jery tena feno, natao manokana amin'ny famerenam-peo.
totem: Ilay mpilalao sarimihetsika ofisialin'ny GNOME.
MPlayer: motera matanjaka be sy ny sisiny aloha.
SMPlayer: aloha-faran'ny MPlayer miorina amin'ny Qt.
KMPlayer mpilalao audio / video fototra ho an'ny KDE.
Kaffeine: ny mpilalao feno ho an'ny KDE.
Ogle: Mpilalao DVD manohana ny menus DVD.
Helix: Mpilalao haino aman-jery mifototra amin'ny mpanjifa DNA Helix.
Realplayer: mpilalao format realaudio.
Miro: sehatra ho an'ny fahitalavitra sy horonan-tsary ho an'ny Internet.
Moovida Media Center: sehatra ho an'ny fahitalavitra sy horonan-tsary ho an'ny Internet.
mihidy: Mpilalao sarimihetsika tselatra.
Ny VLC Media Player dia toa mpilalao tsotra ihany tamin'ny voalohany, saingy tsy tsotra izany. Ankoatry ny fijerena tsara (sy ny fanamboarana azy amin'ny alàlan'ny hoditra amin'ny Internet azo sintonina) dia afaka milalao feo / horonantsary avy amin'ny rakitra eo an-toerana, fisie azo jerena ao amin'ny tamba-jotra / internet ary afaka milalao webcam streaming aza. Toy ny mpilalao MPlayer, ny codecs dia nalaina tao amin'ny FFmpeg, libavcodec ary ny modely codec hafa toa ny Cinepak, libmpeg2, MAD ary ny Vorbis. Ny mpilalao VLC dia manohana karazana dikanteny isan-karazany koa raha te hijery sarimihetsika misy dikanteny ianao.
Toy ny MPlayer, VLC dia afaka milalao rakitra maloto sy tsy feno ary manolotra fiasa hanandramana manamboatra horonantsary simba. Izy io koa dia manohana sivana, toy ny tonian-dahatsoratra taorian'ny famokarana, ary ahafahanao manitsy ny fifanoherana sy ny famirapiratana.
VLC dia manana fonosam-pifandraisana ho an'ny rafitra samihafa, ohatra ny wxWidgets na koa ny interface Qt; Ankoatr'izay dia misy fonosana miaraka amina endrika 50 na hoditra tianao araka ny itiavanao azy. Ao amin'ny interface web dia afaka mamorona playlists na milalao rakitra amin'ny Internet ianao. Maimaimpoana izany ambanin'ny lisansa GPL.
Xine dia iray amin'ireo mpilalao horonantsary Linux tranainy indrindra. Xine dia fampiharana modular, izay midika fa manasaraka mazava tsara ny fotony amin'ny fampiasa fanampiny izay ampiana plugins. Ny ampahany izay azo antsoina hoe ivon'ny mpilalao dia mitantana ny fampifanarahana ny feo sy ny horonan-tsary, manompo ny fifandraisana misy eo amin'ireo maodelin'ny Xine, sns. Avy eo ny plugins dia mihetsika ho toy ny sosona eo anelanelan'ny loharano ipetrahana azy, DVD, VCD ary ilay mpilalao Xine.
Ireo decoder isan-karazany dia manapa-kevitra ny amin'ny fampiasana ireo endrika fisie samihafa ary mampita izany amin'ny Xine, izay mampiasa tranomboky toa ny liba52, libmpeg2, FFmpeg, libmad, FaaD2, na Ogle, ho fanampin'ny codec binary binary toy ny w32codecs.
Xine dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny klavier, ankoatry ny fanindriana ankavanana ny menio; etsy ankilany, mampiditra fiasa fampifangaroana izay manandrana manamboatra rakitra video efa simba. Maimaimpoana ity mpilalao ity eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL.
Iray amin'ireo mpilalao horonantsary malaza indrindra ny Totem, izy ilay mpilalao izay apetraka amin'ny alàlan'ny default amin'ny fizarana Gnome sy Linux toa an'i Ubuntu, Mandriva, ary Fedora.
Ny mpikaroka rakitra Nautilus dia mampiseho, amin'ny alàlan'ny plugin Totem, topi-maso amin'ny video ary lisitra misy antsipirian'ny codecs, refy ary faharetan'ny horonan-tsary. Misy plugin iray hafa ho an'ny tranokala Firefox izay ahafahanao milalao an-tserasera amin'ny Internet.
Totem dia tsotra sy mandeha ary afaka milalao horonantsary amin'ny efijery feno na avy amin'ireo singa misy output TV. Mamela anao hanao fanitsiana toa ny mifanohitra, ny famirapiratana ary ny lafiny hafa amin'ny playback video. Totem dia mampiasa ny sehatry ny haino aman-jery GStreamer hahazoana ny codecs sy ny mpamily ilaina rehetra. Tokony hojerentsika ihany koa ny plugin Pitfdll izay mamela ny fidirana amin'ny rakitra binary toy ny Quicktime QTX na Directshow / DMO DLL, ka mamerina endrika toy ny WMV 9 na Intel Indeo 5.
Mplayer dia, amin'ny fahalalako sy fahalalako manetry tena, mpilalao mendrika indrindra Linux. Ny codecs zanatany dia ao amin'ny libavcodec, izay indram-bolany amin'ny tetikasa FFmpeg, ary koa ireo codec binary ilaina hilalao horonan-tsary amin'ny endrika MPEG, AVI, ASF, WMV, RM, QT, MP4, OGG, MKV, ary koa ireo rakitra video flash. amin'ny endrika FLV.
MPlayer dia miasa amin'ny karazana mpamily maro: avy amin'ny VESA, X11 ka hatramin'ny OpenGL, na ireo mpamily manokana mifandraika amin'ny karatra sary, toa ny ATI, Nvidia, Matrox. Izy io dia azo fehezina amin'ny tsipika baikon'ny baiko na amin'ny alàlan'ny fampifandraisana mpampiasa sary izay azo ampanjifaina amin'ny hoditra.
Amin'ny fampiasana ny codec libdvdread sy libdvdcss, MPlayer dia milalao DVD tsy misy olana. Amin'ny alàlan'ny libdvdnav, mamela ny fitetezana amin'ny menus DVD izy io. Ny mpilalao dia manohana endrika haino aman-jery maro an'isa ary mamela ihany koa ny fanamboarana horonantsary simba. Ny sivana isan-karazany dia azo foronina amin'ny famerenana amin'ny laoniny horonan-tsary, ny fanovana ny safidin'ny vahaolana, ny habaky ny dikanteny, ny famirapiratana, ny haavon'ny fifanoherana, ny feo ary ny fitehirizana ireo safidy ireo ao anaty fisie fikirakirana.
MPlayer dia afaka mandefa rakitra amin'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny protokol HTTP, FTP, MMS na RTSP / RTP, na dia miaraka amin'ny proxy aza.
MPlayer dia natao ho interface feno ho an'ny MPlayer, miaraka amin'ireo safidy ho an'ny zavatra fototra, toy ny filalaovana horonantsary, DVD ary VCD mankany amin'ireo safidy mandroso kokoa toa ny fanohanana ny sivana MPlayer sy maro hafa.
Iray amin'ireo zavatra mangatsiaka indrindra momba ny SMPlayer: tsarovy ny safidin'ny rakitra rehetra lalaovinao. Manomboka mijery sarimihetsika ianao fa tsy maintsy mandeha ... aza manahy, rehefa manokatra ilay horonantsary ianao dia hitohy amin'ny toerana nandaozanao azy io, ary miaraka amin'ireo safidy mitovy aminy: track audio, dikanteny, volume .. .
Safidy mahaliana hafa:
Dikanteny azo fehezina. Azonao atao ny misafidy ny endritsoratra sy ny habeny ary na ny loko aza.
Fisafidianana ny làlana audio. Azonao atao ny misafidy ny làlana audio tianao. Izy io dia miasa amin'ny fisie avi sy mkv. Ary mazava ho azy miaraka amin'ny DVD.
Horonan-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny kodiaran'ny totozy. Azonao atao ny mampiasa ny kodiarana totozy handroso na hihemotra amin'ny alàlan'ilay horonantsary.
Equalizer video, ahafahanao manitsy ny famirapiratany, ny fifanoherana, ny volony, ny saturation ary ny gamma amin'ilay sary mihetsika.
Hafainganana amin'ny playback marobe. Azonao atao ny milalao 2X, 4X ... na mihetsika miadana aza.
Sivana. Misy ny sivana isan-karazany: deinterlacing, post-processing, fanesorana tabataba ... ary ao anatin'izany ny sivana karaoke (manala ny feo).
Fanitsiana ny fanamafisam-peo sy ny dikanteny.
Safidy mandroso, toy ny fisafidianana codecs demuxer na video sy audio.
Lisitry ny filalaovana. Io dia ahafahanao manampy rakitra maromaro izay ho lalaovina manaraka. Misy ihany koa ny safidy ho an'ny famerenana ny fiara sy ny filalaovana kisendrasendra.
Resaka fifampiresahana. Azonao atao ny manamboatra safidy SMPlayer mora foana amin'ny fifampiresahana mahafinaritra.
Fahaizana mitady ho azy dikanteny amin'ny openubtitles.org.
Dikan-teny: SMPlayer dia nadika tamin'ny fiteny 20 mahery, ao anatin'izany ny Espaniola, Alemanina, frantsay, italianina, rosiana, sinoa, japoney ...
Izy io dia multiplatform. Misy binaries ho an'ny Windows sy Linux.
SMPlayer dia eo ambany fahazoan-dàlana GPL.
KMPlayer dia mpilalao tena feno, mora ampiasaina, milamina ary mailaka. Kandidà iray ho tonga mpilalao tokana ilainao amin'ny PC anao ho an'ny horonan-tsary sy horonam-peo.
Raha ny famerenana amin'ny laoniny horonantsary, ny KMPlayer dia tena mandaitra ary manohana endrika maro, raha mbola apetrakao ireo kaody.
Raha miresaka KMPlayer amin'ny maha-mpilalao audio antsika isika dia tsy azo ihodivirana ny fahatsiarovana an'i Winamp, betsaka ny zavatra mifototra amin'izany ka na ny iray amin'ireo fikandrana KMPlayer dia antsoina hoe "Winamp Library".
Web toerana: KMPlayer.
Ny Kaffeine dia afaka milalao DVD, VCD, CD, playlists noforonin'ny mpampiasa, mamela ny hilalao horonan-tsary amin'ny endrika AVI izy io miaraka amina sub extensions, smi, srt, asc, ssa na txt. Ahitana plugin iray amin'ny tranokala Mozilla Firefox fa tsy maintsy sintonina misaraka.
Mba hilalaovana horonan-tsary WMV / Quicktime / Real Media, alao ny fonosana codec win32 farany avy amin'ny www.mplayerhq.hu ary adikao amin'ny: / usr / lib / win32 ny fisie.
Ogle dia mpilalao efa taloha, na dia talohan'ny Xine aza. Izy io no mpilalao horonantsary Linux voalohany manohana tanteraka ny famerenana DVD sy ny fitantanana menio. Ireo mpilalao horonantsary hafa dia nilalao endrika audio sy video vitsivitsy izay tsy natokana ho an'ny DVD toa an'i Ogle.
Ogle dia manana kinova samihafa ao amin'ny trano fitehirizan'i Fizarana Linux izay mampiantrano azy. Ny interface graphique dia misy fonosana misaraka, ary mila ny tranomboky libdvdcss ianao hilalaovana ireo DVD voahidy. Ao amin'ny interface Ogle dia afaka misafidy toko ianao, manova dikanteny na misafidy safidy audio hafa, izy io dia manana fiasa ho an'ny sarimihetsika miaraka amin'ny fomba fijery amin'ny lafiny maro. Io no mpilalao DVD tsara indrindra taloha, fa ankehitriny misy mpilalao hafa afaka manome traikefa ho an'ny mpampiasa tsara kokoa.
Adiresy Internet: http://sourceforge.net/projects/ogle.berlios/
Helix / Tena mpilalao
Tetikasa Helix dia noforonin'ny RealNetworks. Mampiasa ny kaody tetikasa Helix amin'ny fampiharana azy tahaka ny mpilalao RealPlayer malaza ihany koa. Helix Player no kinova Open Source, miorina amin'ny Helix Client ary ampiasaina amin'ny telefaona 350 tapitrisa, na dia misy endrika voafetra aza.
Helix dia manana fanohanana ny codec H.263 ampiasaina amin'ny filalaovana horonantsary flash. Na izany aza, toa tsy afaka milalao horonan-tsary FLV na horonan-tsary amin'ny tranokala toa ny endrika YouTube, AVI, MPEG, MP3, na DVD. Tsy manome olana amin'ny endrika OGG izy io, saingy tsy dia be mpampiasa toy ny hafa. Ny RealPlayer ho an'ny Linux dia tsy mandroso tahaka ny kinova Windows, fa mihoatra ny mpilalao Helix izy io, milalao endrika MP4, Flash, WMV9, na dia manana olana amin'ny endrika AVI, MPEG, na DVD aza izy io. Samy manana plugin ho an'ny mpizaha tranonkala ny mpilalao roa ary mamela ny playlists.
Real Player, ilay haino aman-jery malaza rmvb, no kinova «mihidy» na «tompona» an'i Helix. Raha ny fahafantarako azy dia manana fanohanana tsara kokoa ho an'ny endrika sasany izy ity, saingy amin'ny farany dia fandaharana iray ihany… ka, eo amin'ny toeranao dia aleoko i Helix.
Tranonkala: Helix & Mpilalao tena izy
Miro Izy io dia mpilalao mahay indrindra ho an'ireo izay te-hijery horonantsary an-tserasera marobe na hanaraka podcast, sns. Azonao atao ny misintona horonantsary avy amin'ny fantsona miorina amin'ny RSS, mitantana ary milalao azy ireo. Miro dia natao hampifangaroana amina vokatra PCF hafa toy ny Video Bomb, tranokala fanamarihana horonantsary momba ny horonan-tsary sosialy, ary ny Channel Channel, torolàlana TV amin'ny fahitalavitra Internet.
Miro Player dia miorina amin'ny XULRunner, ary rindrambaiko maimaim-poana izany. Azo ampiasaina amin'ny rafitra fiasa Microsoft Windows, GNU / Linux ary Mac OS X izy io, ary mampiditra mpampiorina loharano RSS, mpanjifa BitTorrent, ary mpilalao haino aman-jery VLC (na Xine Media Player eo ambanin'ny GNU / Linux).
Azo alaina amin'ny 10 Febroary 2009, ny kinova 2.0 an'ny Miro dia miavaka amin'ny alàlan'ny interface tsara kokoa, ny hafainganam-pandeha haingana kokoa amin'ny Torrents ary ny fampisehoana tsaratsara kokoa izay avy am-pelatanan'ny fampiasana fitadidiana ambany. Ny tsara indrindra dia izao manomboka izao, ny programa dia mamantatra ho azy ny fisian'ny atiny famaritana avo lenta (HD) rehefa misintona horonantsary, zavatra iray izay hanatsara ny vokatra farany.
Moovida, fantatra taloha amin'ny anarana hoe Elisa, dia tetikasa mikendry ny hamorona "foibe media" marobe. Raha tianao ny ivon-haino aman-jery ary manana ny sarinao, mozika ary horonan-tsarinao ao anaty programa tokana, safidy tsara io; ny fiovana hita izay nanjo azy tato ho ato dia nahafinaritra indrindra.
Moovida dia mihoatra lavitra noho ny mpilalao haino aman-jery tsotra, mamela antsika handamina ny tranomboky misy safidy maro koa ho an'ny horonan-tsary, feo ary sary. Ny interface kanto sy mora ampiasaina dia mampiseho ho azy ny karazana asa rehetra, mandamina haingana ny fanangonana, ary miditra amin'ny sinopsis sy ny fonony amin'ilay horonan-tsary resahina. Ho fanampin'izany, mamela ny fanitarana ny fiasan'izy io amin'ny plugins marobe.
Manohana karazana raki-peo sy horonan-tsary, dikanteny, fahaizan'ny playback audio maro fantsona, tranomboky haino aman-jery, tahirin-tsarimihetsika sy mozika, fanohanana maodely playback maro, playback background, playback DVD, ary plugins be dia be izay mahatonga azy io ho bebe kokoa programa matanjaka.
Gnash dia mpilalao horonantsary flash GNU, miorina amin'ny GameSWF. Ny mpamorona azy dia ao anatin'ny tetikasan'ny Free Software Foundation's Savannah. Ahitana plugin ho an'ny mpizaha tranonkala toa an'i Firefox na Konqueror. Mamela anao hijery horonan-tsary amin'ny vavahady toa an'i Lulu.tv na YouTube.com. Ampiasao ny OpenGL hanatsara ny fisehoana an-tsary an'ny mpilalao desktop anao.
Gnash dia manohana ny rakitra SWF hatramin'ny andiany 7 sy ny fiasa sasany amin'ny kinova 8 sy 9. Afaka milalao horonantsary amin'ny endrika FLV avy amin'ny tranokala malaza toa ny YouTube na Myspace. Manantena ny hamoaka kinova ho an'ny Windows sy Mac izy ireo atsy ho atsy. Safidy tsara ho an'izay maniry hitazona ny System tsy misy kaody tompony.
Noho izany dia misy mpilalao marobe isan-karazany hisafidianana ny mpampiasa Linux, amin'ny tombana ankapobeny dia azo heverina ho mandroso indrindra ny Mplayer, na dia zatra mampiasa iray hafa aza ianao dia tsy te-hiova. Mety tsara izany na dia manana milina miadana na fitaovana malemy aza ianao, toy ny solosaina miorina amin'ny processeur Celeron.
Nisy nanadino ve aho? Niteraka firesahana fampahalalana manan-danja ve izany? Avelao aminay ny hevitrao sy ny zavatra niainanao amin'ireo mpilalao horonantsary ao Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Mpilalao horonan-tsary rehetra ao amin'ny Linux
frann dia hoy izy:
Ny alter-ego-ko izay mampiasa WIndows KMP Plus, iray amin'ireo mpilalao horonantsary tsara indrindra hitako. Ary indrisy fa tsy nahita mpilalao izay ahatsapako fahafinaretana mihitsy ... 🙁
Mamaly an'i frann
Nisy nametraka ny programa "SRS Audio Sandbox", voalaza fa zavatra maro no tratra amin'ny feon-kira, horonan-tsary, sarimihetsika.
Izaho dia nitady programa handrenesana mozika sy hijerena horonantsary miaraka amin'ny feon'ny kalitaon'ny mpilalao haino aman-jery windows 11 sy 12, satria ireo napetrako tao amin'ny FEDORA 17 dia tsy afaka resy lahatra amin'izay fotoana izay. Nahita iray izay mbola tsy napetrako aho ary tena tiako izany raha misy manana izany mamaky ny zavatra niainany tamin'io.
Amin'ity lalana ity dia misy lohahevitra maro ho an'ny LINUX http://xenodesystems.blogspot.mx/2012/02/ecualizador-nivel-sistema-en-linux.html
mitady programa handrenesana mozika sy hijerena horonan-tsary a
feo kalitaon'ny mpilalao haino aman-jery windows 11 sy 12, nanomboka
ireo izay napetrako tao amin'ny FEDORA 17 dia tsy afaka mandresy lahatra ny tenany amin'izay fotoana izay
feo. Nahita iray izay mbola tsy napetraka aho ary tena tiako izany
raha misy manana dia vakio ny zavatra niainany tamin'io.
manudechile dia hoy izy:
Salama ny mailako toy izao:
Mila fanampiana be dia be aho hahazoana traikefa amin'ny Linux
Alefako amin'ny sofina ianao
Miarahaba anao Manudechile
Mamaly amin'ny manudechile
Copado: trano fisakafoanana "open source" =)
Prey: ahoana no hahitana ny solosainao raha angalarina izy